Indlela yokwenza iItransference kwiiNkcazo zaseKhaya
Ukwenza iziNyango zakho zeNkundla
Ukukhetha iintyatyambo ezisetyenziselwa ukwenza izitshixo zakho ngokwalo yinkqubo yokukhula kwangaphakathi kunye nokuqonda . Iintlobo zeentyatyambo ziintyatyambo zezilwanyana ezilungiselelwe ukusuka ekungeneni kwelanga kwisitya samanzi, emva koko zihlanjululwe, ziyakwazi, kwaye zigcinwe nge-brandy.
Amanyathelo okwenzela uMama imihlobiso yeentyatyambo zakho
Ukutyunjwa kwezixhobo - Steriliza izixhobo zakho ngokuzihlamba ngamanzi ashushu. Qiniseka ukuba ungachukumisi ngaphakathi ngaphakathi kwesitya kunye neembiza emva kokuhlamba ukuqinisekisa ukuba ucoceko lwenkqutyana kufuneka iqhutywe.
Tune kwi-Deva Energies - Ukuxhuma nge-Intuitively kunye neDeva (iqumrhu okanye inkqubela yobomi) yeentyatyambo ozikhethileyo ukuba usebenze ekunqumeni ukuba zininzi iintloko zeentyatyambo eziza kuqokelelwa (ngokubanzi ukuya kweyesihlanu) nganye kwiindidi.
Ukuqokelela kweentyantyambo - Qoqa intloko yentloko ngokubashiya kwi-glass saucer ngelixa uqikelele ukuba ungayisebenzisi. Ukubachaphazela okanye ukuwafakela kuya kuguqula amandla eentyatyambo.
Ukulungelelanisa ngokuCwangcisiweyo kweeNtyatyambo - Khipha ii-petals usebenzisa i-scissors okanye i-crackers. Vumela ukuba iipalesi ziwele kwi-glass saucer ngaphandle kokuziphatha ngezandla zakho.
Sebenzisa amanzi aseDistilled - Gcwalisa isitya se-quart ezimbini kunye nekota enye yamanzi e-distilled.
Faka iiPetali kwiManzi - Phakamisa iipalali enye kunye kwaye uzibeke kwisitya samanzi ukuze i-petal nganye ithinte umgangatho wamanzi. Iipalali ziya kuhamba. Vulela ukukhulula zonke iintlobo ze-stamen ngaphambili.
I-Solarize - Beka isitya kwigadi okanye kwindawo enelanga ngaphandle.
Gcina iintlobo zeeNtyambo ezahlukileyo - Phinda amanyathelo 2-7 nganye kwiindidi ezahlukeneyo zeentyatyambo ozenzayo ngexesha lokulungiselela. Musa ukudibanisa iintlobo kunye.
Isicelo sokuthandazela - Nika isicelo sokuthandaza kwimimoya yendalo yokuphulukisa iimpawu zeentyatyambo ukuphathwa ngelanga. Vumela imizuzwana engama-30-60 kwisitya esigcwele iipalali. Amandla kaDeva akhululwa ngaphandle kwamanzi.
Inkqubo yexesha - Vumela inkqubo yokumisela ukuba yenzeke. 3 hrs. - ilanga lelanga, 2 hrs. - ngenye imini
I-Preservatives - Gcwalisa amabini amabhitridi angamanzi angama-1 qt. brandy. Ixabiso eliphakanyisiweyo li-brand-40% ye-brandy kunye ne-60-50 ekhulwini (essay 50%).
Izixazululo ezidibeneyo - Gcwalisa isisele seengqayi ngesisombululo seentyatyambo esisondezayo.
Ukubhaliweyo - Khusela imbiza nge-lid ecocekileyo kunye neentsimbi kunye nelebula ngegama leentyatyambo kunye nomhla.
Ukusetyenziswa koMbane weeMandla - Izimbiza ezigqityiweyo zingafakwa kwiziko lomyezo wakho okanye enye "indawo yamandla" ekuqhutyweni kokugqibela.
Ndiyakuvuyela - Unyoko wakho umama uphelile! Izitshixo zakho zenziwe zihlanjululwa zibe ngamaqhekeza omlinganiselo kwiindawo ezifanelekileyo.
Izixhobo eziyimfuneko kunye neengcebiso eziNcedo
Izixhobo kunye neempahla ezifunekayo: iisisi, iigufi ezide, isitya seglasi ezimbini zeglasi, i-glass saucer, amanzi adibeneyo, iindwangu zokugaya izitya kunye neebhondi, i-brandy
Ixesha elihle lokuqokelela iintyatyambo: 8 AM - 10:30 AM. Usuku olusenyakalo lufuneka ukuba ulungiselele iintlobo zeentyatyambo!
Olungcono umhla wokuqokelela: Khetha iintyatyambo ngosuku ngaphambi kokuba uvule ngokupheleleyo.
Kubalulekile ukuba uqaphele: Ukukhetha ukuba yintoni intyatyambo enokuthi ibe yintsimi yokusebenzisa kwakho ngokwakho ingaba yinkqubo yokukhula kwangaphakathi kunye nokuqonda.
Akuyimfuneko ukuthatha iintlobo zeentyatyambo ngokuthe ngqo kwiibhotile ezinomxholo ophezulu kwi-brandy kuzo kuneebhotile. Izitshixo ze-Stock zingancibilikiswa zibe yizahlulo zesilinganiso esiya kunciphisa i-brandy esetshenziselwa imali encinci.
Ngokomzekelo, andiqhathanisi ukuthatha umyinge ngqo kwiibhotile. Ndiyithathile idosi (ngokungaqhelekanga) ngokuthe ngqo kwintlamba yam isicombululo seThulo esiThutyana esingu-5 kuba ndiyigcina kwipakethi yam yokuhamba kwaye xa ndiziva ndixinezelekile kumzuzwana kunokuthatha isithintelo ngqo kule bhotile kunokulungiselela isahlulo esihlanjululweyo. Kukulungele ukuba ungabikho ngokukhawuleza ukusuka kumatshini wakho omama njengendlela yokuqapha ukungahlambuluki ngokungathinteki ngokuthe ngcembe kwintsimi kulwimi lwakho okanye kumathe.
Izinketho zoLondolozo lweeNkokeli eziLondolozo lweeNkokeli zeeNkokeli zakho
Iibhotile ezinokuthi zilungiselelwe kunye nemifuno ye-glycerin okanye i-aple cider iviniga njenge-preservative.
Lungisa (hlambulule kwaye uncilise) ibhotile ye-tincture ye-ounce engenanto kwaye ugcwalise 1/4 kwibhotile ngokukhetha kwakho okunye okulondolozayo. Beka 2-3 amaconsi amachiza ekhethiweyo ngalinye kwi-bhotile ye-dosage, uze uzalise intsalela ngamanzi acocekileyo. Ibhotile ye-one ounce i-ounce iyakudlala malunga neentsuku eziyi-10-12 ukuba uhlala uthatha amaconsi angama-4 ngosuku. Ukusetyenziswa kotywala kuya kuba ngumlinganiselo olandelwayo ukusuka kumaconsi ama-2-3 kwisitshixo esisuka kwiibhotile.
Kuba mna, ngenxa yokuba ndifumana ikhemisi epheleleyo yezitshixo ezisezantsi, ndihlala ndingakhathazeki ukusebenzisa nayiphi na indlela yokulondolozwa kokuthatha amanani. Ngeentsuku endifuna ukuyisebenzisa izitshixo ndibeka 1-2 amaconsi esitshixo ngasinye (ukusuka kwiibhotile) apho ndikhethile kwi-bhotile eyodwa ye-12 ye-bhotile yamanzi acocekileyo. Ndiza kusela "amanzi anxibeleleyo" kulo lonke usuku. Iintlobo zeentyatyambo zisebenza kakuhle kule fom ehlanjululweyo. Izixhobo zisebenza kakuhle xa zithathwa rhoqo. Ngoko kunokuba utyunye i-dropper ngokuthe ngqo kwi-bhotile yomthombo ndincoma ukuba wenze amabhotile.
Iibhotile zomthombo weentyatyambo zentyatyambo zifumaneka ngokuthe xaxa kwiimarike zanamhlanje. Kukhuselekile ngokufanelekileyo ukusebenzisa amaconsi ngokuthe ngqo kumalungiselelo enu owathengileyo okanye kwi-stash yakho yemithi yempahla. Nangona kunjalo, ukuba uthabatha ininzi yeentyatyambo zentyatyambo kukulungele ukulungiselela iibhotile ezitshatileyo kunokuthatha amaconsi ambalwa ukusuka kwiibhotile ezintathu, ezine, okanye ngaphezulu. Ngokukodwa xa uhamba, ukuphosa ibhotile enye kwikhwama yakho yokukhupha kwenza kube lula.
Enye ibhonasi ekulungiseleleni iibhotile zakho zetyala kukuba yenza ukudibanisa kweentyatyambo ezininzi kwiindleko eziphezulu.
Uluphi ulwahlulo phakathi kweMithombo yamanzi kunye noTywala?
Iibhotile zomthombo (ii-Mother Mother Tinctures) zizityalo ezingenayo iindidi eziye zityhutyelwa ukunyusa unyaka, nokuba zide. Ziquka ukulondolozwa okongeziweyo ukugcina ingqibelelo kunye nokhuseleko. Ngakolunye uhlangothi, kwenziwa iibhotile, ngamanye amaconsi amancinci (ngokukodwa 2-3) ukusuka kumama kunye namanzi okusela athathwe phantsi kolwimi okanye aphethwe emlonyeni kathathu ngosuku ngosuku lwe-10 ukuya kwe-14 .
I-Step-by-Step Instruction Yokwenza I-Bottle Deos
Hlanganisa iimpahla - Iibhotile ze-Tincture, amanzi e-bottled spring, umlondolozo (okukhethiweyo), isitokisi okanye isitshixo.
Iziqhamo zeentyatyambo - Kungcono ukuba ungahlanganisi ngaphezu kwezihlanu ezihlukeneyo kwiibhotile enye. Ukuba amayeza athathwe amaxesha amane ngalunye njengoko kunconywa ibhotile ye-dosage iya kuhlala ilishumi iintsuku ezilishumi elinanye. Yenza isigqibo malunga nombandela ofuna ukugxila kuwo kwiiveki ezimbalwa ezilandelayo uze ukhethe izitshixo ngokufanelekileyo. Unokuthi usebenzise izicwangciso zeentyatyambo ezifakwe kwiifom yefayili yakho ngokwakho ngokucamngca okanye ukuvavanya imisipha. Okanye, ungabonisana neengcali zentyatyambo ukuze uncedwe ekukhetheni iinjongo ezifanelekileyo ngenjongo yakho.
Amanzi - Amanzi aseMthombo wamanzi asisigqibo esona sikhetele ngenxa yokuba ngokwemvelo kutyunjwe ngamandla omhlaba jikelele. Ukuba awukwazi ukufikelela kwamanzi entwasahlobo e-bhotile, ukuhlanjululwa, okanye amanzi adibeneyo uyakulungiswa phezu kwamanzi epompo.
Ugcino - Awuyi kulusebenzisa nayiphi na indlela yokulondolozwa xa uhamba kuphela ukulungiselela ibhotile yeesayunithi esisodwa nje kuphela xa idliwe kwisithuba seveki ezimbini. Kodwa, ukuba ulungiselela amabhotile amaninzi okusetyenziswa kwiinyanga ezimbalwa okanye ngaphezulu uza kuyidinga ukulondolozwa. UBrandy uyona nto ikhethekileyo. Musa ukubamba ibhotile ye-brandy kwikhabhinethi yakho yotywala. Ukuthenga ibhotile, uzinikezele ngenjongo yokuphilisa, kwaye uyisebenzise kuphela ukulungiselela amalungiselelo eentyatyambo. Iibhotile ezinokuthi zingalungiselelwa kunye nemifuno ye-glycerin okanye i-aple cider iviniga xa ukhetha izilondolozo ezingekhoyo utywala.
Amabhodlela - Iibhotile ze-Glass tincture ngokuvamile ziza kwisiqingatha esinye, esinye, kunye nobunzima obukhulu. Sterilize iibhotile, ii-caps kunye ne-droppers zamaso ngamanzi atyukileyo okanye kwi-washing machine.
Gcwalisa ibhotile - Gcwalisa i-1/4 yebhotile ngokukhetha kwakho ukulondoloza. Beka 2-3 amaconsi ekhethiweyo ngalinye lempahla kwi-bhotile ye-dosage. Gcwalisa intsalela yebhotile ngamanzi ukuvumela indawo encinane yokubeka iliso kwi-eye.
Ukusetyenziswa okucetyiswayo - Amaconsi ayishumi phantsi kweelwimi ezine ngeentsuku. I-bhotile ye-one ounce yesilinganiso iya kuqhubeka malunga neentsuku ezili-10 ukuya ku-14 ukuba zifakwe rhoqo.
18 I-Super Funny kunye neCards Business Business Cards
Isiqendu sisetyenziswe kwisiGragram
Amaqiniso kunye neJografi yoRhulumente waseTexas
UNorse uThixo uLoki